XOG: Qorshaha G/Benadir uu ku doonayo in uu natiijo wacan uga keeno tartanka M/Gobolleedyad | Ciyaarside.com
Dec 22, 2017 - Aragtiyood
Tan iyo markii ay G/Benadir ka hartay tartanka M/Gobolleedyada waxaa cirka isku sii shareerayey carada ay muujinayaan jamaahiirta xulka G/Benadir kuwaas oo ay u cuntami weysay sababta sanadkii labaad oo xiriirka tartanka lagu qabtay Muqdisho ay xittaa kama dambeysta u tagi waayeen.
Benadir ayaa ku hartay afar dhammaadka tartanka sanadkii labaad oo is xiga waxaana kala reebay labada kooxood ee hadda isugu soo haray Fiinaalaha – Jubbaland iyo Puntland oo iyagu sanadkii labaad oo xiriir ah wada dheelaya kama dambeysta.
Iyada oo aysan wali caddeyn halka lagu qaban doono midka sanadka dambe walow ay jiraan xan hoose oo sheegeysa in Puntland la siin doono xuquuqda martigalinta ayey G/Benadir codsi u direen Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed.
G/Benadir masuuliyiintiisa ayaa ka codsaday sida aan ka soo xiganay ILO LAGU KALSOONAAN karo oo diiday in magacooda la xuso in ay weydiisteen in G/Benadir ciyaaryahanada iminka u jooga lagu daro horyaalka heerka labaad ee dalka.
Sida xogta lagu sheegay waxaa loo qori doonaa nushaar ciyaaryahanada hadda matalayey G/Benadir si la’isugu hayo.
Arintan ayaa sabab u ah cabasho badan ayey muujiyeen masuuliyiinta G/Benadir oo ku saabsan xulidda ciyaaryahanada oo ay caqabad kala kulmeen sanadkan.
ILO KALE oo si weyn loogu kalsoon yahay ayaa Goolfm.net u sheegay in G/Benadir dhib kala kulmeen xulidda ciyaaranada maadama maamul gobolleedyada kala ah Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyagu qaar ka mida ama badi xiddigohooda ka doorteen G/Benadir.
Arinta kale ee iyana culeyska ku noqotay g/Benadir ayaa ah in laacibiinta matala ay ku kala biiraan kooxaha heerka kowaad ee dalka kuwaas oo aan loo ogoleyn in ay ka qeyb galaan tartanka M/Gobolleedyada.
Hadaba si la’isugu sii hayo kuwii hadda joogay dibna loogu xoojiyo kuwo kale ayuu maamulku ka codsaday Xiriirka in horyaalka heerka labaad lagu daro xulka G/Benadir.
Waxaa xusid mudan in xulalka M/Gobolleedyada Jubbaland iyo Puntland ay ka kala ciyaaraan horyaalada deegaankooda oo aysan inta badan ama gabi’ahaanba saameyn horyaalka heerka kowaad ee dalka sidaasna ku soo laabtaan iyaga oo iska sii xoojoyey marka uu bilowdo tartanka.